रमेशकी पत्नि नन्दाको आँखाको शल्यक्रिया गरिँदै, रमेशको पालो कहिले ? रमेश र नन्दाले एक अर्कालाई हेरेर प्रेम साट्ने दिन कहिले आउला ? – Khabaarpati
December 31, 2020 December 31, 2020 goodmamLeaveaComment on रमेशकी पत्नि नन्दाको आँखाको शल्यक्रिया गरिँदै, रमेशको पालो कहिले ? रमेश र नन्दाले एक अर्कालाई हेरेर प्रेम साट्ने दिन कहिले आउला ?
धरानका प्रखर पत्रकार तथा रमेश प्रसाइर्ंका निकटका मित्र जीवन विस्टको विगत केही समय अघि देखि आँखा मा समस्या भएदेखी उनी अहिले आँखा को शल्यक्रिया गर्न तिलगंगा अस्पतालमा पुगेका छ्न । प्रख्यात डाक्टर सन्दुक रुइतसंग अहिले जीवन विस्टको शल्यक्रिया भइरहेको छ ।
संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था छैन : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा विघटित संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय काठमाडौँमा उपलब्ध नेता–कार्यकर्ताको भेलालाई आज सम्बोधनका क्रममा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै त्यसैले चुनावको तयारीमा जुट्न आफ्ना नेताकार्यकर्ता र सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आपसमा अन्तरविरोध भए पनि चुनावमा मिलेर जान प्रस्ताव गर्दा उहाँले अस्वीकार गरेको सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण हुने अठोट व्यक्त गर्दै विभिन्न विमानस्थल र पूर्वाधार विकास÷निर्माण तीव्र गतिले भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँनयाँ काम भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिएको छ । एकै दिनमा ३०० भन्दा बढी अस्तपाल उद्घाटन गरेका छौँ । जनता आवास निर्माण, विद्यालय र अस्पतालको पुनः निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता धेरै क्षेत्रमा प्रगति हासिल भएको छ । भएको कामलाई पनि नदेख्ने दृष्टिदोष भएकाबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
“हाम्रो काम भत्काउने होइन, देश बनाउने हो । हामीले अब आन्दोलन र पार्टी जोगाउनुपर्छ । तपाईँहरु अघि बढ्नुस्, मेरो शुभकामना छ”, उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा नेकपाका नेता लेखराज भट्टले सडकमा गएर पार्टी एकता नहुने जनाउँदै चुनावको तयारीमा लाग्न सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले ओली नेतृत्वको नेकपामा ‘लिगेसी’ रहेकाले यस पक्षमा लाग्न आह्वान गर्दै सडकमा विरोधका नारा नउठाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई साथर्क बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले सत्ताका लागि भन्दा पार्टी एकतामा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो ।
नयाँ वर्ष २०२१ मा यी ५ राशिमाथि हुनेछ लक्ष्मी माताको कृपा: धन, सुख र समृद्धिले भरिनेछ जीवन
रेशम चौधरी छुटाउने च,लखेल हुँदा खुल्यो टिकापुर घ,टनामा उनले ले के के गरेका थिए (भिडियो सहित)